Qiimo jaban 6016 aluminium daaweyn kuleyl daaweyn ah Qalabka makiinada CNC qaybaha iyo warshadaha | Ouzhan
6016 aluminium daaweyn kuleyl daaweyn ah qaybo ka mid ah qalabka mashiinka CNC
Daaweynta kuleylka ee aluminium tuurista daawaha waa in la doorto qeexitaan cayiman oo daaweyn kuleyl ah, xakamee heerka kuleylka si loogu kiciyo heerkul gaar ah muddo cayiman isla markaana la qaboojiyo xawaare gaar ah si loo beddelo qaab-dhismeedka daawaha.
6016 daaweynta aluminium ee kuleylka
Mabda'a daaweynta aluminium ee kuleylka kuleylka
Ujeedada ugu weyn waa in la hagaajiyo aaladaha farsamada ee isku-dhafka iyo xoojinta iska caabinta. Waxqabadka daxalka, hagaajinta waxqabadka waxqabadka, iyo helitaanka xasillooni cabbir leh.
Nooca kala soocida aluminium ka baaraandegidda ku habboon daaweynta kuleylka:
Aluminium Aluminium ah ayaa lagu hagaajin karaa xoog, qaab-dhismeed, iyo waxyaabo kale iyadoo la adeegsanayo qabow, demin, gabow, iyo habab ku-lifaaq. Marka loo eego nidaamka hawlgalka noocan oo kale ah si loo helo guryaha loo baahan yahay, qalliinkan waxaa loo yaqaan daaweynta xanaaqa, iyo kala soocidda xanaaqa waxaa loo yaqaan nooca xanaaqa. Guud ahaan marka la hadlayo, qalabka aluminium-ka ee wax u dhimaya ayaa qiyaas ahaan loo qaybiyaa laba qaybood: nooca daaweynta aan kuleylka ahayn iyo nooca daaweynta kuleylka: aluminium saafi ah (1000 taxane ah), Daawaha taxanaha ah ee Al-Mn (taxanaha 3000), Al-Si taxane ah (4000 taxane) iyo Al-Mg Series Alloys (5000 taxane) waa kuwo aan kuleyl aheyn; Al-Cu-Mg alloys taxane ah (taxane 2000), Al-Mg-Si taxane alloys (taxane 6000) iyo Alz Z n-Mg alloys taxane ah (7000 taxane) waxay ka tirsan yihiin daawaha kuleylka lagu daaweeyay.
Ouzhan kartoo aluminium daawaha machining qaybo soo saarka wax soo saarka
Waa maxay saameynta daaweynta kuleylka daawaha ah ee aluminium?
6063 aluminium aluminium wuxuu leeyahay heer-kul-kulmeed wanaagsan, iska caabbinta daxalka u fiican iyo sifooyinka farsamaysan ee habboon, waana sahlan tahay in koronto la geliyo, sidaa darteed waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa soosaarka astaamaha warshadaha, qaab dhismeedka qaab dhismeedka iyo qalabka hiitarka elektarooniga ah. Waxay kuxirantahay jawiga arjiga ee maaddada, waxaa jira kala duwanaansho weyn oo ku saabsan shuruudaha waxqabadka sheyga. Tusaale ahaan, badeecadaha waxqabadka sare ee loo isticmaalo nidaamka qaboojinta saldhigga elektiroonigga ah waxay leeyihiin shuruudo sare oo loogu talagalay iska caabbinta dusha sare ee qalabka, iyo astaamaha qaabdhismeedka ee loo adeegsado dhismooyinka darbiga daahyada dhaadheer waa balaastiga iyo shuruudaha xoogga ee qalabka ayaa ah mid aad u adag, taas oo waxay si gaar ah muhiim uga dhigeysaa in la soo saaro qalabka aluminium ee waxqabadka sare leh. Nidaamka cilmi-baarista iyo horumarinta ee aluminiumyada noocaas ah, hababka daaweynta kuleylka waxaa loo isticmaalaa meelo badan si loo helo qaab-dhismeed iyo sifooyin wanaagsan.
Hore: Qaybaha aluminium ee aluminium
Xiga: Aluminium aluminium daawaha qaybo ka mid ah